Posted on 11 / 18 / 2019 by 阿斯劳 akanyora garari.
Kana ikashandiswa sekuwedzera, Pyridoxal Hydrochloride inogona kubata kana kudzivirira matambudziko mazhinji ekurapa. Inowanzo kutorwa nejekiseni, nemuromo kana mune zvekuwedzera zvekudya.
Zvakajairika sosi ye pyridoxine hydrochloride vhitamini B6 mune chikafu inosanganisira zviyo, huku / turkey, miriwo nemichero.
2. Nei Vagadziri Vemuviri Vachida Vhithamini - pyridoxine Hydrochloride?
Semuvaki wemuviri, iwe unozoda zvimwe zvinovaka muviri kupfuura avo vanotungamira mararamiro ehupenyu. B-6 pyridoxine hydrochloride inonyanya kukosha kwauri nekuti icho chinhu chinodiwa mune mhasuru phosphorylase, chiitiko chakabatana ne glycogen metabolism. Muchidimbu, iwe unoda vhitamini B6 kune metabolism ine hutano. Vitamini B6 inowedzera mashandiro ema enzymes ayo anotora chikamu mukuputsika kweprotein.
Pyridoxine hydrochloride mhedzisiro mumuviri zvine zvakawanda zvekuita nebasa rayo mupuroteni metabolism. Ndosaka kana uchiishandisa, zvinokurudzirwa kuti udye protein yemangwanani usati warova jimini. Iwe unogona zvakare kutora mapuroteni-akapfuma chikafu panguva yako usati waita-Workout, paunenge uchidzidzira, mushure mekudzidziswa uye usati warara.
Nekudaro, izvi hazvireve kuti iwe unofuratira zvimwe zvekudya. Muviri wako unoda kuwanda kwemamwe zvicherwa zvakakosha kuti ushande zvakanaka uye kukudzivirira kubva kuzvirwere.
Unodawo simba rakawanda panguva yebasa. Pyridoxine hydrochloride inobatsira muviri wako nekuwedzera iwo mwero wekutsva kwemakabohydrate mumasero ako. Izvi zvinoita kuti uwane simba rakaringana.
Muna 1939, Folkers naHarris vakagadzirisa chimiro che pyridoxine. Makore matanhatu gare gare, Snell yakaratidza kuti B6 yaive nemhando mbiri: pyridoxamine uye pyridoxal. Iro zita rekuti Pyridoxal Hydrochloride rakauya nekuti vhitamini B6 yaive yakarongeka homologous kune pyridine.
Pakati peB-mavitamini, Pyridoxal Hydrochloride ndiyo yakakosha kune ese ari maviri epanyama uye epfungwa hutano hwevakavaka muviri. Iyo inobatsira mukukura kwemasero matsva, kutsanangura Pyridoxine hydrochloride kuvaka muviri kugona. B6 zvakare inobatsira mukuyera potassium uye sodium, uye mukugadzira nucleic acids, DNA uye RNA iyo inoitawo chikamu.
Kushomeka kwePyridoxal Hydrochloride kunotungamira mukutya, kugumbuka, kushaya hope, kushaya simba, rurimi rwunopisa, nzara dzakakora, arthritis, uye osteoporosis.
Nekudaro, sekumwe kutsvagurudza, iyo yazvino Pyridoxal Hydrochloride dosage inokurudzirwa kune vanhu vanoshanda neHurumende yeUS haina kukwana.
Izvi zvinoreva kuti avo vanogumira mapoka ezvikafu kana kudzora macalorie vanogona kunge vari kuita njodzi yekushomeka. Naizvozvo, ivo vanogona kusabatsirika kubva kune pyridoxine hydrochloride mhedzisiro kana vakangotora muyero sekurudzirwa nehurumende.
Zvichienderana nezvakabuda mukutsvagisa uku, zvingave zvakanaka kubvunza nyanzvi yezvehutano kuti ubatsire kuona yakanakisa / yakakwana pyridoxine hydrochloride yekuvaka muviri yako.
B-6 pyridoxine hydrochloride inoita basa rakakosha mukugadzirisa mamoods. Izvi zvinodaro nekuti inogadzira maurotransmitter anodzora manzwiro. Pyridoxine hydrochloride yepamuviri yakakosha kune vakadzi vane manzwiro kana vane mafungire anokonzerwa nekusaenzana kwehomoni panguva yekuzvitakura.
Imwe ongororo inosanganisira vanhu gumi nevatanhatu vane hunyoro hwekukanganisa kugona uye huwandu hweropa homocysteine ​​hwakawana kuti yakakwira pyridoxine hydrochloride dosage inoderedza mwero wehomocysteine ​​muropa uye zvakare inoderedza kudzikisira kwezvimwe zvikamu zvehuropi zviri panjodzi yeAlzheimer's.
Imwe yeiyo pyridoxine hydrochloride mabhenefiti ndeyekuti inogona kushandiswa kurapa zviratidzo zvePMS kusanganisira kusagadzikana, kushushikana, uye kusagadzikana. Vatsvagiri vanotenda kuti vhitamini B6 inogona kubata izvi zviratidzo nekuti inogadzira maurotransmitter anobatsira mukugadzirisa mamiriro.
Kwemakumi emakore, vhitamini B6 yakashandiswa pakurapa kusvotwa uye kurutsa mumadzimai ane nhumbu. Icho zvakare chinongedzo cheDiclegis, mushonga unoshandiswa mukurapa kwekurwara kwamangwanani. Ichi chiri pakati pemhando yepamusoro pyridoxine hydrochloride mabhenefiti evakadzi vanotambura nemamiriro aya panguva yavo yepamuviri.
Iyo chaiyo pyridoxine hydrochloride dose mukuzvitakura inosiyana kubva pamunhu kuenda kumunhu. Chidzidzo chakabatanidza vakadzi vane nhumbu makumi matatu nevaviri vakawana kuti muyero wezuva nezuva we342mg wevhitamini zvakaderedza manzwiro avo ekusvotwa mazuva mashanu chete mushure mekutanga kwekurapwa
Pyridoxine hydrochloride inoita basa rakakura mukudzivirira kuvharika kwetsinga nokudaro ichideredza njodzi yehosha yemoyo. Kana uine huwandu hwakaderera hwevhitamini B6, njodzi yako yekuwana chirwere chemoyo inogona kupetwa kaviri kana ichienzaniswa neavo vane zvakajairika mavitamini muropa. Vitamin B6 inoderedza mikana yetsinga dzinovhara nekudzikisa huwandu hwehomocysteine ​​muropa.
Mune kumwe kutsvagurudzwa kwakaitwa kuti uone hukama pakati pyridoxine hydrochloride mazinga uye kenza yemazamu, zvakaonekwa kuti huwandu hwakakwana hweB6 muropa hunoderedza njodzi yekenza yemazamu, kunyanya mumadzimai ekumapopopaopausal.
Vitamin B6 inobatsira kudzivirira zvirwere zvemaziso, kunyanya izvo zvine chekuita nekukwegura - zera-rinoenderana macular degeneration (AMD). Paunenge uine huwandu hwakakwira hwehomocysteine ​​inoyerera muropa rako, uchave nemukana wakakura wekuvandudza AMD. Pyridoxine hydrochloride inobatsira mukuderedza mwero wakakwira wehomocysteine ​​muropa nekudaro kudzikisa njodzi ye AMD.
Kumwe kutsvagurudza kwakabatana matambudziko eziso kumazinga akaderera muropa; kunyanya matambudziko emaziso anotungamira mukuvharika kwemitsipa yakabatana neretina. Iyo yakaderera mwero we pyridoxine hydrochloride yakave zvakare ichibatanidzwa nekukanganisa kweiyo retina.
Pyridoxine hydrochloride yakachengeteka kuti ishandiswe nevanovaka muviri. Izvo zvakare zvakachengeteka pakushandisa zvekurapa. Nekudaro, ine mhedzisiro dzakasiyana muvanhu vakasiyana Mamwe e pyridoxine hydrochloride mhedzisiro anosanganisira:
Kana iwe ukawana yakaoma pyridoxine hydrochloride mhedzisiro saka zvingave zviri nani kuti iwe utsvage kurapwa.
Yakanyanya yakakwira madosi ePyridoxal Hydrochloride inogona kukonzera kusagadzikana kwetsinga. Idzi nyonganiso dzinogona, zvakare, kutungamira kumatambudziko ehutano uye kurasikirwa kwekunzwa mumakumbo. Kune zvekare mimwe mishumo yekuti yakakwira doses ye pyridoxine hydrochloride inogona kutungamira kuganda. Nerombo, kana iwe ukamira yakakura dosi, iwe uchapora zvakakwana.
Paunenge uri pamushonga wePyridoxal Hydrochloride, haufanire kumira, tanga kuushandisa wakasangana nemumwe mushonga, kana kushandura dosi pasina kubvumidzwa nemupi wako wezvehutano.
Kunyangwe hazvo Pyridoxal Hydrochloride isina kuwirirana kwakakomba kana kwakakomba nemimwe mishonga, zvinogara zvakanaka kungwarira.
Kungofanana neLuminal, Pyridoxal hydrochloride (65-22-5) inoputsa ichi chemikemikari kuti chibvise kubva mumuviri wako. Kutora mubatanidzwa weDilantin uye Pyridoxal Hydrochloride kunoderedza kushanda kweiyo yekutanga mumuviri wako. Izvi zvinogona kuwedzera mikana yekuti iwe uwane kumwe kubatwa.
Pyridoxal Hydrochloride ine kudyidzana kuderera nemishonga inodarika makumi manomwe. Saka, usati washandisa chero chinodhaka pamwe chete nacho, ita shuwa kuti unotaurirana nemupi wako wezvehutano.
Iwo mabhenefiti ePyridoxal Hydrochloride kune ekuvaka muviri akawanda. Kwete chete vavaki vemuviri, mutambi wese akakomba anoda kuve neiri vhitamini mudura. Nekudaro, iwe unofanirwa kuishandisa mukuomerera zvakanyanya kune iyo dosi inokurudzirwa nevashandi vezvekurapa.
Flibanserin Inobatsira Sei Mukadzi seHormone Yezvepabonde Synephrine HCL Powder - Mafuta anopisa uye uremu hwekuwedzeredza